I-defroster yangemuva iyinkqubo encinane engaziwayo, kodwa iyakwazi kakuhle. Akuzange kube yimfihlo ixesha elide ukuba ukuba uqhuba ngoku ngokujikeleza kwesekethe ngokuxhatshazwa okukodwa, uya kufumana ubushushu. Kodwa usebenzisa le nto ukuphelisa inkungu kunye neqabunga kwiifestile zeemoto zakho kuphela kwiifestile ezimbalwa ezedlulileyo, kunika okanye uthathe isibini. Le mihla, kunye nomgca weqhosha yonke loo miqolo encinane kwindowenu yangemuva (kunye ne-antenna efanayo kwiphepha le- windshield yakho yangaphambili ) ukutshisa ukutshisa i-fog kunye neqhwa. Xa besebenza kakuhle, ezi nkqubo zinkulu. Xa bengasebenzi, ngaphantsi kokukhulu. Kukho imiba emininzi emininzi eyenza ukuba lezi zihlunu ziphumelele ukuba ndicinga ukuba ipesenteji enkulu zazo azisebenzi. Iindaba ezilungileyo xa ucinga ukuba kukho into engalunganga ngayo, unokuzilungisa .
Ukujongana neengxaki kunye nokuvavanya i-Defroster yakho yangemva
Ithebhu ephukileyo okanye enqanyuliweyo ingagcina i-defroster yakho yangasemva yokusebenza. Hlola uqhagamshelwano lwakho. umfanekiso ngo-Matt Wright, ngo-2012
Iindaba ezilungileyo kukulula ukubona into ephosakeleyo ngayo. Njengoko ndathi, inkqubo ye-defroster enye yesekethe ejikelezayo eyenzela ukuba umbane ugqitha kuwo. (Ok, ngokuqinisekileyo ezinye iinkqubo ziinkalo ezimbalwa ezijikelezayo ezineenkalo ezinamathisela amaninzi, kodwa oko akuchaphazeli indlela ojongayo ngayo okanye uyilungise!) Le miqolo encinci yenziwe ngopende oluqhubekileyo olusetyenziswa ngqo kwiglasi. Oku kwenza i-defroster ibe yinkomfa kakhulu kwaye iphele. Kwakhona kuthetha ukuba nayiphi na ip okanye i-scratch kuloo peyinti yokuqhuba ingenza inkqubo ingasebenzi.
Ukuhlola okuBonwayo: Ngamanye amaxesha kukho ukuphambuka okucacileyo kwisiphaluji esicatshulwa okanye enye ingxaki enokukwenziwa lula kunye nokuhlola okubonakalayo. Okokuqala qwa lasela iifayile zokuxhumeka ezibhekise kwicala lasekhohlo kunye nekhohlo kwipridi yecwecwe. Ngamanye amaxesha ezi zidibeneyo zithengiswa kwindawo. Unokwazi ukubona uxhumo olumkileyo lwe-solder ngenxa yokuba kuya kuba nekhompyutha evulekileyo, ekhangelekayo ekufuneka ixhunywe kwi-grid, kodwa akukho ndlela yokuyibuyisela kwakhona. Ukuba uxhumano lwakho oluthengisiweyo luye lwasuka, luyakulungiswa ngekiti ekhethekileyo equle i-soldering paste (ngokukodwa i-epoxy glue ezele isinyithi ukuze iqhube umbane). Buza iinxalenye zakho zeesitoreji kulolu hlobo lwenkithi. Ukuba unomnxeba ogqithisayo onomxhasi ekugqibeleni, amathuba akhe asebenze ngokukhululeka kwawo kwenye indawo yeso sixhobo esikulo gridi. Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba unolu hlobo lweengxaki, vele uxhume kwakhona umnxeba uze ubone ukuba uyaphinda usebenze.
Isinyathelo esilandelayo ekuhlolisweni kwakho okubonakalayo kukujonga kwimigca emancinci yegridi ngokwayo. Ngamanye amaxesha ukuphuka kwigridi kubangelwe into engaphakathi kwimizi kwaye uye washiya i-sratch ephawulekayo okanye ilahlekileyo kwipayipi. Landela igridi yonke ngamehlo akho ukuze ubone ukuba unokufumana ikhefu. Ukuba awuboni nantoni na engalunganga ngelihlo elize, lixesha lokuphuma kwisixhobo sokuvavanya. Kwiphepha elilandelayo ndiza kuxubusha indlela onokuyivavanya ngayo i-defroster yakho yangasemva usebenzisa isicatshulwa esilula esifumaneka kwiidola ezimbalwa kwi-auto parts store. Ukuba awuqinisekanga ukuba uqhagamshelwano lwesiphaluka sakho sesekethe, ingaba yinto efanelekileyo yokubonisana nencwadi yakho yokulungisa .
Ukusebenzisa ukuKhanya koVavanyo kwiinkinga ezijongene ne-Defroster yakho yangemva
Isibane sokuhlola esinje siya kukunceda ufumane ikhefu kwisiphaluka sakho sokuhamba. umfanekiso ngo-Matt Wright, ngo-2012
Xa usugqibile ukuhlola okubonakalayo kwegridi yakho ye-defroster (kwaye ukuba ungenanto ngaphandle kwezicombululo), unokuqala ukuvavanya inkqubo ngezesayensi. Ungasebenzisa ukukhanya okuqhelekileyo kule nkqubo, nangona kunjalo, izibane zokuhlola ezi-12-volt zidinga umbane onamandla ukukhanya ngokugqithiseleyo kunokuba i-defroster yangemuva inikezela. Ngenxa yeso sizathu, kuluvo oluhle ukuthenga umhloli ongenasisiseko ngokukodwa kwiinkqubo ezingasemva. Isibane sabo sovavanyo siya kukhanyisa ngeyona ncinane encinci yamandla ehamba ngayo, kwaye oku kuyincedo ekujongeni iingxaki zokukhupha imida ye-defroster.
Uvavanyo lweMandla onke: Into yokuqala ofuna ukuyifumana ukuba ingaba igridi yakho ye-defroster ithola amandla kuwo onke. Ngamanye amaxesha i-wiring endala okanye i-fuse ephosakeleyo ingabangela ukukhutshwa okupheleleyo. Ukuvavanya oku, ungasebenzisa okanye isibane sokuhlolwa kwesitrosi okanye umhloli wesiphaluka. Nqamula zombini iingcingo ukusuka kwicala lomgca wegridi. Chukumisa okanye qhafaza umgca omnye komhloli wakho kwi nganye fayili - ukuba ukukhanya kufike, unamandla. Ukuba akunjalo, kufuneka uhlolisise i-fuse yakho kwaye utshintshe ifowuni embi okanye engaqinisekanga ukuba awuqinisekanga. * Qaphela: Qinisekisa ukuba unomtshini wokuvala umgca wecala kwaye isitshixo siphendulela kwi-ON xa uvavanya.
I-Grid Power Test Test: Ngaphambi kokuba uqale ukuxhalaba malunga nayo yonke loo mizila encinane edwetshiwe, kufuneka ukhangele ukuba kukho na amandla okufikelela kwigridi yakho yomgca. Unqamle umnxeba osondeleyo kwinqanaba lomgibeli, uze unamathele isiqwenga sesibane kwisixhobo socingo (kungekhona isicatshulwa esincinci eselunxwemeni). Phinda uthinte omnye ucingo lwesibane sokuhlola kwisitya ngaphesheya kwesiphaluka (ungayinqamuli ucingo kulo). Ukuba ikhanyisa, kukho amandla okunene ekufikeni kwigridi.
Uvavanyo lokuphulwa kweGridi: Ukuba uqinisekisile ukuba kukho amandla okufikelela kwigridi ngokwayo, umqhubi wakho ombi mhlawumbi ngenxa yokuphuka kwisiphaluli esithile. Oku kunokwenzeka ukuba i-defroster yakho ibonakala isebenza kwinxalenye yecala lakho elingemuva. Namathisela ukuphela kwesicatshulwa sesibane sokuvavanya kwithebhu yecala lomqhubi okanye enye inxalenye yensimbi ebonakalayo yeso sixhobo. Emva koko, qala ukuchukumisa esinye isiphelo sesibane sakho sokuvavanya kwisiphaluji esicwecwe. I-Frost Fighter, uphawu olwaziwayo lwekiti yokulungisa i-defroster, lubonisa ukufaka isikhombisi esincinci se-aluminium ekupheleni kwetawu ukuqinisekisa ukuba awuyikukhangela isiphaluji esicwecwe. Chukumisa igridi nganye ngamasentimitha amathathu okanye ukuze ufumane indawo yokuphuka. Kuqhelekile ukuba ukhanyiso lukhanyise kwezinye iindawo, ngokukhawuleza nje xa kukhanya. Ukuba ufumana ukuphuka kwisiphaluka, unokwenza uqhube umgca wokuhlola emva nangaphambili, udibanise kunye, de ukwazi ukuba yintoni na apho yayeka ukusebenza khona. Emva kokuba wazi kakuhle apho ikhefu likhona, unokwenza ulungiso olufanelekileyo!
Indlela yokukhusela ngokukhuselekileyo iTank yakho yerhasi
Nceda! Inqwelo yam i-Oil Leaking!
Indlela Yokujonga Iimpawu Zakho zeBrake ngaphandle koNcedo
I-Ford Mustang Sprint ye-1966 ye-1966
Inkqubo Yokuzala Abantu